AKHRISO:Hadalladii uu MD Farmaajo ka jeediyay golaha loo dhan yahay ee jimciyadda qurumaha ka dhexeysa | Star FM
Home Wararka Soomaaliya AKHRISO:Hadalladii uu MD Farmaajo ka jeediyay golaha loo dhan yahay ee jimciyadda...
Kulanki sannadlaha ee golaha loo dhan yahay ayaa qabsoomay, xilli madaxda caalamku ay ka hadlayeen waxayaalaha siyaasiga ah ee ka socda gudaha dalkooda iyo arrimaha caalamiga ah ee si weyn u saameya dunida dal ahaan ay halka ka taagan yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamad Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in meel gabagabo ah uu marayo hannaanka in dalka ay ka dhacdo doorashooyin xor iyo xalaal ah, oo loo dhan yahay, taasi oo sida uu sheegay ay ka qeybgalayaan tirada ugu badan ee ka qeybgalayaasha doorashada Soomaaliya tan iyo dagaalladii sokeeye.
Madaxweyne Farmaajo oo khudbad ka jeedinayay golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay in doorashooyinkaasi ay udub-dhexaad u yihiin ilaalinta xuquuqda iyo rabitaanka muwaadiniinta Soomaaliya.
Waxaa uu sidoo kale ka hadlay xakamaynta iyo ka soo kabashada saameynta dhaqaale ee uu reebay cudurka COVID-19 iyo sidii dhammaan shacabka Soomaaliya loo wada gaarsiin lahaa tallaalka, dardar gelinta iyo dib-u-habaynta Qaramada Midoobay, Ilaalinta deegaanka iyo isbeddellada cimilada adduunka.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa si gaar ah qodobbada uu uga hadlay waxaa ka mid ahaa hannaanka doorashada dalka iyo halka uu marayo, isaga oo sheegay in meel gebogebo ah wax marayaan.
Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii u danbeeyey uu khilaaf u dhaxeeyey isaga iyo ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Iyada oo dad badani ay u arkaan, in khilaafkani wakhti kale dib u sii dhigi karo hannaankii doorashada.
Halka xildhibaannadii meteli lahaa Gobollada Waqooyina aan weli la dooran.
Soomaaliya dhawr jeer oo hore ayay doorashadu dib uga dhacday xilligii ay ku muddaysnayd.
Dhinaca kale Madaxweyne Farmaajo ayaa ka hadlay safmarka cudurka Coronavirus, iyo sida ay dal ahaan ula tacaalayaan.
Shalay ayay ahayd markii Soomaaliya markale soo saareen, shuruuc lagaga hor tagayo cudurka, xilli ay wasaaradda caafimaadku sheegtay in mowjaddii saddexaad ee cudurka uu dalku galay.
Khudbadda Madaxweyne Farmaajo ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobaya ayaa ahayd, mid la sii duubay oo iyada oo muuqaal ka baxaysay kulanka golaha.
Next articleDHAGEYSO:Shacabka xaafadda Islii oo loogu baaqay inay qaataan kaararka Huduma